काठमाडौँमा दोस्रो इफेरा पुरस्कार पाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध प्याकेजको विरोधमा पक्राउ परेका पक्राउहरूले आइतवार मेतीघार मंडलामा पक्राउ गरेको छ।
सिरहा,असार १६ गते । नेपालका पर्यटनको पदोन्नतिको लागि ठोस निष्कर्ष बिना देशको लाखौं खर्च गर्ने कार्यक्रमलाई तुरुन्तै आयोजना गर्ने योजनालाई रद्द गर्न को लागी धेरै नेताहरूले पोस्ट गरे कि उनीहरुको केपी शर्मा ओली प्रशासन र नेपाल पर्यटन बोर्ड बनाएको छ। सरकारले गडबडको दुबै पक्षलाई भने, पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न वैकल्पिक माध्यम खोज्न आवश्यक छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता, नारायण काजी श्रेष्ठले "पर्यटनलाई बढावा गर्न यो हार्दिक विचार हो"। "यो एक प्रकारको गी जरा छ।"
प्रहरीले मात्र वार्षिक बलिउड चलचित्र पुरस्कारको मेजबानी गर्न सरकारको निर्णयको महत्त्वपूर्ण थियो तर लाखौंलाई आयोजकहरूलाई पनि काठमाडौं ल्याउन काठमांडूलाई प्रदान गर्ने।
"नेपालको सरकार कसरी नेपालमा एक फिल्म चलचित्र कार्यक्रम होस्ट गर्न एक अरब रुपैयाँको काम गर्दछ?" श्रेष्ठले भने।
20 जुनमा, एक मंत्रिमंडल बैठकले अगस्तको अन्त्यमा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मी अकादमी एकेडेमी पुरस्कार 2019 को होस्ट गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्यो। प्रारम्भिक बजेट अनुमान अनुसार, यो घटनाले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई आयोजकलाई4मिलियन डलर र6मिलियन डलर नगद नगद नगरी, अन्य खर्चहरू जस्तै रसद र ट्राभलस जस्तै।
नेपाल पर्यटन बोर्डको साथमा आयोजन आयोजक विजिक्यान्ट इन्टरनेशनल कमेन्टले पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विश्वभरको समारोहको विशाल दर्शकको बारेमा केही मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएका छन्, नेपाललाई नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने । सरकारले बोर्डलाई मन्त्रिपरिषद्का लागि आवधिक, सीमा शुल्क र सुरक्षा को सुबिधा गर्न निर्णय गर्नु अघि कुराकानी गर्न आग्रह गरेको थियो।
तीन दिनको घटना सहभागी भएको छ अगस्त 29 मा सुरु हुने 500 सेलिब्रिटीहरू संग सहभागी हुन। आयोजकले अतिथिका लागि निःशुल्क वा रौतहट कोठा र बोर्ड उपलब्ध गराउन काठमांडूका होटलहरू पनि अनुरोध गरेको छ।
एक दुर्लभ उदाहरण मा, आईएफएएफ पुरस्कारहरू उपस्थित पार्टी र विपक्षी पार्टीबाट राजनैतिक नेताहरू सँगसँगै ल्याईन्छ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेता मिनेंद्र रिजलले पनि नेपालमा पर्यटन को बढावा गर्न को लागि बलिउड सितारों को आमंत्रित गरे पछि तर्क को प्रश्न गरे।
"सरकार किन यो प्रकार्यको लागि एक अरब रुपैयाँ खर्च गर्दछ? यदि हामी त्यो रकम भारत, चीन वा अन्य देशहरूमा खर्च गर्छौं, यो आईएफएएफले प्रस्ताव गर्न सक्ने भन्दा ठूलो भिन्नता हुनेछ। "
कांग्रेस नेताले नेपाल सेनाको मुख्यालय भित्रको घटनालाई मेजबान गर्ने ठाउँमा थप रिजर्भेसन व्यक्त गर्नुभयो, पुरस्कारका लागि योजनाबद्ध स्थान।
"नेपाल सेना मुख्यालयले आफूलाई पार्टीको महलमा परिणत गरेका छन्," उनले भने।
तर ओलि प्रशासनका केही अधिकारीले काठमाडौंमा पुरस्कार पाउने निर्णयको रक्षा गरे, सरकारले आफैंलाई कार्यक्रमको होस्ट गर्न केहि खर्च नगरेको छ।
ओलीको प्रेस सल्लाहकारले पोस्टलाई बताए। "सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई मात्र सुविधा दिनेछ र आप्रवासन र करार जस्ता रसदजस्ता सुविधा प्रदान गर्नेछ"। "सरकारले यो स्वीकार गरेको छ कि यो घटना नेपालको पर्यटनलाई बढावा दिनको लागि साधनको रूपमा हुनेछ र नेपाललाई उच्च अन्तराष्ट्रिय पर्यटक ल्याउने आशा गरिएको छ।"
सन् 1 997मा सामाजिक सञ्जालमा नेपाल भ्रमण बोर्डले एक संवाददाता सम्मेलन गरे र यसले "नगद र दया" मा छलफल गर्न र कार्यक्रमको लागि कार्य योजना तयार पारेको थियो।
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी दीपक राज जोशीले "प्रारम्भिक रूपमा, हामी [नेपाल पर्यटन बोर्ड] ले आयोजक विजिक्राफ्ट अन्तरराष्ट्रिय $4मिलियनलाई भुक्तानी गरेको थियो। यो भुक्तानी विमानस्थल, होटल र यातायातमा समावेश छ।
जोशीले भने "बोर्डले यस कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा फ्याँकिरहेको छैन।" "हामीसँग निजी क्षेत्र र काठमाडौं मेट्रोलिटन सिटी हो भने प्रायोजक प्रायोजकहरू छन् तर उनीहरूका आर्थिक योगदानहरू घोषणा गरिएका छन्।"
जोशीले भने कि राष्ट्रिय खजानाबाट कुनै रकम प्रयोग हुनेछैन। यसको सट्टा, बोर्डले आफ्नै फ्यानमा डुबेको छ, जो घटना प्रायोजक गर्न 1.7 बिलियन भन्दा बढी छ। सार्वजनिक-निजी साझेदार साझेदारी मोडेलको तहत, सरकार पर्यटन पर्यटन बोर्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने सबै विदेशबाट पर्यटन सेवा शुल्कको रूपमा 1,130 रू। जम्मा गर्न अनुमति दिन्छ।
"लुकाउन केही पनि छैन। पहिलो प्रस्ताव घटनाक्रम आयोजक द्वारा केहि तीन महिना अगाडि गरिएको थियो। आफ्नो प्रस्ताव को मूल्यांकन पछि, हामी विश्वस्त भए कि यस्तो घटना हाम्रो लागि महान लाभ उत्पन्न हुनेछ, "जोशी प्रेस सम्मेलन मा भन्यो।
तथापि, सबैलाई विश्वस्त छैन। आइतबार आइतबार आयोजना गरिएको कार्यक्रमको विरोध गर्न मेतीघार मंडलमा एक रैली आयोजित गरिएको थियो।
एक सत्तारुढ पार्टीका नेता भीम रावल भन्छन्, "नेपाली फिल्म उद्योगलाई बढावा दिन सरकारले कति पैसा कमाएको छ?" "कसैले मलाई बताउन सक्छ कि कतिपय भारतीय पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गर्ने नेपाल भ्रमण गर्नेछन् र उनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति योगदान गर्नेछन्?